15 taona nanaovana hosodoko: manan-talenta tiany hozaraina i Nary Arthur | NewsMada
15 taona nanaovana hosodoko: manan-talenta tiany hozaraina i Nary Arthur
Anarana efa fantatra eo amin’ny tontolon’ny hosodoko. Na ny Malagasy na ny vahiny, samy mitolagaga amin’ny fahaizan’i Nary Arthur ny sary hosodoko. Efa nitety sehatra maro ny sanganasany tao anatin’ny 15 taona…
Razafiarison Nary Arthur ny tena anarany, saingy i Nary Arthur ny soniany misoritra eny amin’ny tabilao, misy ny aingam-panahiny. Mbola tanora dia tanora izy, saingy efa 15 taona ny nilomanosany eo amin’ny tontolon’ny hosodoko. Efa hatramin’ny fahakeliny no tia manao sary i Nary Arthur. Ny fifanenany tamin’ny artista efa manana traikefa no nanampiany ny fahalalany. Mampiavaka an’i Nary Arthur ny fitiavany manokana manao sary ireo karazana fitaterana (fiara, fiaramanidina, lamasinina, sns) sy ny tontolo manodidina ary ny fanaovana sariolona na « portrait ».
Tsy voatanisa ny sehatra efa nahitana ny sanganasan’ity mpanakanto ity, anisan’izany ny fandraisany anjara tamin’ny fifaninanana « Loka Paritana » farany teo. Toy izany koa ny fampirantiana niarahany tamin’ny mpanakanto namany. Tsy azo hadinoina ny fanehoany ny kantony, nandritra ny fotoana maharitra, teny amin’ny foiben’ny Akamasoa eny Ambohimahitsy, toerana nitaiza azy.
Amin’izao fanamarihany ny faha-15 taona nanaovany hosodoko izao, lehibe indrindra amin’i Nary Arthur ny fahafahany mizara ny talentany amin’ny hafa. Miantso fanohanana izy amin’ny fananganana toerana hanofanana ny ankizy. Hetahetany koa ny hisian’ny « galerie » hanaovana fampirantiana mitohy ireo sanganasany.
Ankoatra ireo, tanjona lehibe apetrak’i Nary Arthur ny hamoahana boky ahitana ireo sanganasany. « Efa vonona avokoa ireo sary sy ny zavatra ho hita ao, saingy mila fanohanana eo amin’nny vola ny fanontana io boky io », hoy izy. Anisan’ireo tanora sangany eo amin’ny tontolon’ny hosodoko izy ka inoana fa hisy handre sy hanome lanja izany faniriany izany.
Mandra-piandry izany, fanomezana hatolony ireo mpankafy hosodoko ny fampirantiana ampitondraina ny lohateny “Kofoka 2018”, etsy amin’ny Tahala Rarihasina Analakely. Miisa 10 ireo mpanakanto hafa miara-mampiranty aminy ao ka misy ampahany amin’ny vola azo avy amin’ny fivarotana ireo tabilao no hoentina hanampiana ireo ankizy mirenireny eny an-dalambe, araka ny voalazany. Tsy hifarana raha tsy ny 25 novambra izao ity hetsika ity.